Primax Electronics kugadzira iPhone 7 Plus kamera module | IPhone nhau
Nehurombo, Apple haina kutishamisa zvikuru kwemakore neese matsva ekutanga kwe iPhone. Kana vachipa iyo iPhone 7, kushamisika kungave kuti iyo 5.5-inch modhi haina kamera ine malenzi maviri atakaona mukudonha kwakasiyana kwemwedzi. Kubva pakuonekwa kwayo, maererano DigiTimes, modules mamwe eiyo iPhone 7 Plus makamera ichagadzirwa nekambani Primax Electronics.
Iyo Taiwanese kambani yakawedzera yayo kamera module inokwana ne10% mumwedzi ichangopfuura, ichiwedzera kugadzirwa kwayo kusvika gumi nemaviri mamirioni eCMOS zvikamu pamwedzi. Zvese zvinoenderana neDigiTimes, 12% yekuwedzera ikoko ichaenda 13 megapixel module izvo zvinozoitirwa iyo iPhone 7 Plus, chinova chokwadi chinonakidza chekuti hapana runyerekupe rwakatiudza nezvarwo kusvika zvino.
Ko iyo iPhone 7 Plus ichave ne13 + 13Mpx kamera?
Imwe yeguhwa pamusoro peiyo iPhone 7 / Plus inoti iyo 5.5-inch modhi inoshandisa a 12 + 12Mpx kamera. Kana ruzivo kubva kuDigiTimes rwakarurama, tinogona kufunga kuti iyo iPhone 7 Plus kamera ichave 13 + 13Mpx asi, kana tikatarisa kuti Primax Electronics ine vatengi vakawanda kupfuura Apple, zvingangoitawo kuti iwo 13 megapixel module ndee chero imwe mbozhanhare.
Kwekupedzisira Chikumi, Bussines Korea yakabudiswa ruzivo rwakavimbisa izvozvo LG Innotek Ingangove yega mutengesi weiyo iPhone 7 Plus kamera, asi Apple haina kuita mirairo yese kukambani imwechete kwenguva yakareba kuti izvirape muhutano. Kusvika parizvino ndanga ndagara ndichishandisa malenzi eSony, asi zvinoita sekunge gore rino havasati vasvika munguva yekuendesa zvirevo zvemalensi maviri. Chinhu chega chasara kutarisira ndechekuti gore rino hatizove ne # CameraGate kana chimwe chakafanana neicho chatakange tatova nacho gore rapfuura ne #ChipGate, zita ravakapa kuchinetso icho Apple yakashandisa TSMC uye Samsung processors mu iPhone 6s / Uyezve.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Primax Electronics ichagadzira mamwe mamamojuru eiyo mbiri kamera yeiyo iPhone 7 Plus